Distoorka Iswiidhan | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Saamayn ku yeelanshada Iswiidhan / Distoorka Iswiidhan
​Si ee bulshad demoqraaddiyeed uu shaqeeyso waxeey loo baahan yahay xeerar iyo nidaamyo. Xeerarka ka tirsan distoorka waa kuwo ugu muhiimsan Iswiidhan. Xeerarkaasi waxeey asaas uu yihiin sharciyada kale. Waxeeyna muujinayaan habka Iswiidhan loo maamulaayo. Waxeey difaacayaan demoqraaddiyada, waxeeyna ka sareeyaan sharciyada kale. Waxaa taasi laga wada in sharciyada kale ee dalka ee san khilaafki karin waxa ku qoran distoorka.
Sii loo hubiyo hab-dhiskaan in uu oo san qof uu "af-gambin" doorasho kadib, waxaa la asassay nidaam aan sharciyada lagu badali karin sida la doono. Si xeer ka mid ah distoorka loo badalo waa in barlamaanka uu gaaraa isla go'aankaas laba jeer. Sido kale waa in doorasho guud ee dhacdaa inta uu dhaxeeyo labada go'aan. Nidaamkaan waxaa loo dajiyay si ee dowlada uu gaarin go'aan dhaqso badan. Waqtiga ka fiirsashada ee dheeradka ahw waxaa loogu tala galay si fiican looga fiirsado badalka-xeerka. Xeerarka distoorka waxeey diifacaayaan demoqraaddiyada. Distoorka Iswiidhan waxuu ka kooban yahay:
Xeerka hab-dhishka dowlada (RF) oo ku saabsan habka Iswiidhan loo maamulaayo. Xeerka hab-dhiska dowlada ee maanta jiro waa midkii la gaaray 1974:tii. Halkaas waxaa ku qeexan habka e xukuumada uu shaqeeneeyso iyo habka doorashada barlamaanka uu sococneeyso. Xeerka hab-dhishka doowlada (RF) waxuu ka kooban yahay oo kale xeerarka xuquuqda iyo xurriyada asaasiga ah. Tusaale, waxaa xeerka ku qoran xurriyada ururka iyo xurriyada diimaha.
Xeerka isku wareejinta jagooyinka (SO) oo ku saabsan qofka boqor (ama boqorad) ka noqon karo Iswiidhan.
Xeerka xorriyadda wax daabicidda (TF) oo ku saabsan waxa lagu qori karo joornaalada iyo buugaagta. Iswiidhan waxuu qofka qori karaa waxa uu doono laakin ma qori karo qoraal ku ridaayo fal dambi.
Xeerka xuiryada hadalka (YGL) oo ku saabsan waxa uu qofka ka sheego kari raadiyaha, telefishinka, filimaanta iyo internetka. Iswiidhan waxuu qofka ka oran karaa waxa uu doono ilaa heer xad. Tusaale ahaan qofka dadka kale ma caay karo. Waxeey taasi ahaan kartaa waxa laga sheego qof ama koox.